चिनियाँ रेल अब नेपालमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
चिनियाँ रेल अब नेपालमा !
२०७५, ७ असार बिहीबार
काठमाडौं, असार ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच बुधबार बेईजिङमा भएको वार्ताले द्धिपक्षीय साझेदारीका निम्ति दुरगामी आधारहरु खडा गरेको छ ।
खासगरी सार्वजनिक चर्चामा मात्र सीमित रहँदै आएको चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म पुर्याउने परिकल्पनाले अब पूर्णरुप पाउने भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सीमा वारपार रेल सञ्चालनको नेपाली चाहनालाई पहिलोपटक ठोस रुपमा अनुमोदन गरिदिएका हुन् ।
उनले ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा शिष्टाचार भेटका निम्ति पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसामु भने, हामीले छिङहाईदेखि ल्हासासम्म बनाएको रेलमार्ग अहिले शिगात्से पुगेको छ ।
त्यो अझै अगाडी बढ्दै छ र मलाई विश्वास छ, त्यो चाँडै काठमाडौं पनि पुग्नेछ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस पूरा होला रेल सपना ? यसाे भन्छ रेल विभाग
ट्याग्स: Cina, rel, चिनियाँ रेल